အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အလွဲသုံးစားမှုများမရှိစေရန် Mobile Team အဖွဲ့များအား...သီးခြားအဖွဲ့ဖြင့် ထပ်မံကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမည်...။
အလွဲသုံးစားမှုများမရှိစေရန် Mobile Team အဖွဲ့များအား...သီးခြားအဖွဲ့ဖြင့် ထပ်မံကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမည်...။
Scuba Som's photo.
နောက်ထပ်....နောက်ထပ်...နောက်နောက်ထပ်...နောက်နောက်နောက်........... အဟွတ်....အဟွတ်.....အဟွတ်.... ဖွတ်....။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 7:42 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook